Ciidamo Itoobiyaan ah oo Qarax lagula eegtay degaanka Yurkud…. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTACiidamo Itoobiyaan ah oo Qarax lagula eegtay degaanka Yurkud….
Khasaare kala duwan ayaa ka dhashay qarax ciidamada Itoobiya lagula eegtay degaano ka tirsan Gobolka Gedo ee Koonfurta Soomaaliya.
Dadka degaanka Yurkud ayaa xaqiijiyay qarax miino oo ciidamada Itoobiya lala eegtay inuu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, kadib markii gaari noociisa uu yahay Uuraal uu qabsaday qaraxa.
Qaraxa ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa Wadada Luuq iyo Sidoo kale degaanka Yurkud.
Waxa ay sheegayaan dadka degaanka ciidamo gaaraya illaa Shan askari inay ku dhinteen qaraxaasi miinada oo bur bur xooggan gaarsiiyay gaarigii uu qabsaday qaraxa.
Wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in sidoo kale ciidamada Itoobiya ay jiraan dhaawacyo kala duwan oo qaraxaasi ka soo gaaray.
Al Shabaab oo ka dambeysay qaraxa ayaa sheegatay inay dileen askar badan oo Itoobiyan ah oo la socday gaariga Uuraalka ah ee qaraxa uu qabsaday.
War ka soo baxay Shabaab ayaa waxa ay ku sheegtay ku dhawaad 10 askari oo Itoobiyaan ah inay ku dileen qaraxaasi, inkastoo aanan si dhab ah loo xaqiijin karin sheegashada Shabaab khasaaraha intaasi la eeg.
Ciidamada Itoobiya ayaa ku safra degaano ka tirsan Gobolka Gedo oo ay ku sugan yihiin, iyadoo xilliyada qaar ay dhacaan qaraxyada noocaan oo Shabaab ay u dhigaan ciidanka.
716,430 total views, 1,728 views today
716,430 total views, 1,728 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
716,306 total views, 1,729 views today
716,306 total views, 1,729 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
716,335 total views, 1,728 views today
716,335 total views, 1,728 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
716,399 total views, 1,728 views today
716,399 total views, 1,728 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
716,454 total views, 1,729 views today
716,454 total views, 1,729 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]